खानेपानी विषयमा विवाद
लमजुङ्को बेंसीसहर नगरपालिका–२ र ३ अन्तर्गत रानीकुवामा खानेपानीको विषयमा उत्पन्न विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्दै आएको खानेपानी मुहान स्थानीय मध्येकै केही समूहले भत्काएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
सम्बन्धित वडा कार्यालयको दुई लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको खानेपानी ट्यांकी स्थानीय वीरबहादुर बोहोराको नेतृत्वको समूहले पटक–पटक भत्काएको भन्दै रानीकुवाका उपभोक्ताले प्रशासनमा उजुरी दिएका हुन् । रानीकुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलसिँह गुरुङसहित उपभोक्ताहरू प्रशासन कार्यालय पुगी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । खानेपानी मुहानमा पटक–पटक बोरा कोचेर पानी बन्द गरिदिने, ट्यांकीमा फोहोर राखिदिनेजस्ता क्रियाकलाप गरेकोले कारबाहीसहित खानेपानीको सहज आपूर्ति गराइदिन प्रशासनसमक्ष उपभोक्ताले माग गरेका छन् । खानेपानी जस्तो विषयमा पटक–पटक उपभोक्तालाई दुःख दिएकाले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।
“पटक–पटक खानेपानी अवरोध गरेको छ,हैरान भएर प्रशासनसमक्ष आउन बाध्य भयौं,” अध्यक्ष गुरुङले भने,“पानीको ट्यांकीमा फोहोर फाल्दिने गरेको छ, विष हाल्दिन्छुसम्म भनेको छ, आजित भएर प्रशासन आएका हौं ।”
आरोपित बोहोराको समूहले अघिल्लो महिनामात्रै पानी ट्ययाकी भत्काई पानी बहने पाइपमा ढुंगा र बोरा कोचेर खानेपानी अवरुद्ध बनाएका थिए । यसअघि पनि समितिका अध्यक्ष र स्थानीय बुद्धिसागर बरालले संयुक्त निवेदन दिँदै घटनाको विषयमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । तर त्यतिबेला दुवै वडा अध्यक्षको रोहवरमा अबदेखि त्यस्तो नगर्ने सर्तसहित सहमति गरिएको थियो ।
त्यसपछि फेरि केही दिन अघिबाट सोही क्रियाकलाप दोहो¥याएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ । सहमतिलाई तोड्दै फेरि पनि खानेपानी अवरुद्ध भएपछि रानीकुवादेखि भकुण्डेसम्मका उपभोक्ता दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रशासन कार्यालय पुगेका हुन् । उपभोक्ताहरूले क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको माग गरेका छन् ।
“पिउने पानी त नचिनेको बटुवालाई पनि चौतारीमा राखेर दिने गरिन्छ,” स्थानीय वयोवृद्धा धनमाया बरालले भनिन्, “खानेपानीमा पनि अवरोध गर्नुहुन्छ त ?” घरको धारामा पानी नआएपछि स्थानीय पिउने तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पानी लिन नजिकका धारा तथा कुवामा धाउन बाध्य भएकोे बताएका छन् । वर्षा सुरु भए पनि पानीको मुहान राम्रोसँग नफुटेकाले खानेपानीमा निकै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । उपभोक्ताको गुनासो पछि समुदायको यथार्थ बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले बताए । खानेपानी जस्तो विषयमा कसैले पनि अवरोध गर्न नपाउने भन्दै यस विषयमा आफू गम्भीर भएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । तत्कालका लागि प्रहरी पठाएर खानेपानी अवरोध हटाएको र दुवै पक्षलाई एकैठाउँमा राखी विवाद समाधानको पहल गरिएको प्रजिअ डा. भट्टराईले बताए ।
२०६६ सालमा रानीकुवास्थित स्थानीय आमा समूहले मुहान खेत खरिद गरी खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका थिए । अघिल्लो वर्षमात्रै बेंसीसहर नगरपालिकाले खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउन एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेपछि स्थानीय उपभोक्ताले श्रमदानसहित ट्यांकी निर्माण गरेका थिए ।